The Irrawaddy's Blog: တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနဲ့သာ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်မှာ
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနဲ့သာ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်မှာ
ဒီကေဘီအေ စစ်သုံ့ပန်းအဖြစ် ဖမ်းဆီးထားသည့် နအဖ စစ်တပ် စစ်ဦးစီး တတိယတန်း ဗိုလ်ကြီး သက်နိုင် နှင့် အင်တာဗျူး
Posted in: Interview , Video , ဗီဒီယို , အင်တာဗျူး
ကောင်းတယ်ဗျာ ဒီရဲဘော်လေးကြည့်ရတာ စိတ်သဘောထားပြည့်ဝပြီး အမြင်ကျယ်မယ့်ပုံပဲ
သူ့နည်းတူ မြန်မာ့တပ်မတော်မှ စစ်သည် တပ်မတော်သားအားလုံးတို့သည်လည်း စိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေးဖြင့် မိမိတို့၏ ဦးနှောက် တွေးခေါ်ဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းကို နှိမ့်ကွပ်ထားမှုကို သိရှိနားလည်ပြီး လက်ခံဆင်ခြင်နိုင်ကြပါစေ
သူရဲဘော်ကြောင်၍ မိမိတို့၏အသက်ကိုပင်စတေး၍ကာကွယ်ပေးရာတိုင်းပြည်နေ ပြည်သူအပေါင်းတို့၏ဆင်းရဲခြင်းအပေါင်းကိုတည်းသာ ဖော်ဆောင်ပေးခဲ့သော ခေါင်းဆောင်ကောင်းမပြီသသူများအား စွန့်ပယ်ပြီး မိမိတာဝန်ကျေစွာ အသက်ပေးကာကွယ်နေရာ ဘူမိတိုင်းပြည်ရှိ သန်း၅၀သော ပြည်သူတို့အားအမှန်တကယ် တိုးတက်အောင် ကြံရွယ်ပေးနိုင်သူကို ခေါင်းဆောင်ဟူ၍တင်မြောက်ပေးနိုင်ကျပါစေ
တပ်မတော်သားအားလုံး ငြိမ်းအေးကျပါစေ၊ ချမ်းသာကျပါစေ၊ ဆင်းရဲချင်းအပေါင်းမှ လွတ်ငြိမ်းကျပါစေ၊ ပြည်တွင်းစစ်မီးများဖြစ် အညိမ်းမသတ်နိုင်အောင် တမြေ့မြေ့ကျွမ်းနေခြင်းမှ ချစ်လှစွာသော ဘူမိမြေအား ငြိမ်းအေးမှု၊ တည်ငြိမ်မှု၊ အောင်မြင်ချမ်းသာမှုအလုံးစုံကို ဖော်ဆောင်ကြေးဇူးဆပ်နိုင်ကျပါစေ။
PC*** said... :
ကိုယ့်လက်ခုပ်ထဲက ရေလိုဖြစ်နေတဲ့ သုံ့ ပန်းတစ်ယောက်ကို မေးခွန်းတွေနဲ့ ချည်ပြီးတုပ်ပြီး ထိပ်ပိုင်းချင်းဆွေးနွေးရမယ့်ခေ¬ါင်းစဉ်တွေချနေတယ်...ဂျီ ၃ တစ်ယောက်သည် ဂျီ၃ တစ်ယောက် အသိနဲ့ တာဝန်ပဲရှိမယ်...'ဒီပြည်တွင်းစစ¬်ဟာ ဘာဖြစ်လို့ အနှစ် ၆၀ ကျော်ကြာရလဲ..ဘယ်လိုလုပ်ဖို့ လိုအပ်လဲ' ဆိုတာ ကလေးတစ်ယောက်ကိုတုတ်နဲ့ရိုက်ပြီ¬း နောက်လုပ်ဦးမလား လုပ်ဦးမလားလို့ မေးနေတာနဲ့ တူတူပဲ...လိုချင်တဲ့အဖြေသည် နောက်မလုပ်တော့ပါဘူး ဆိုတာကိုမထွက်ထွက်အောင် တုတ်ပြထားတာပါပဲ ...ရင်နာတယ်..ခံပြင်း တယ်..
သုံ့ ပန်းတစ်ယောက်ကို အင်တာဗျုးပြီး ကမ္ဘာ ကိုတင်သတဲ့ ...မင်းတို့မှာ သားသမီးရှိရင် ကိုယ်ချင်းစာ ကွ...ယုတ်မာလိုက်ကြတာ
ဒီကို လာကြတဲ့ ဂုဏ်သရေရှိ တပ်မတော်သား အရာရှိမင်း အပေါင်းတို့ ဒီမှာ comment မလုပ်ကြပါလား။ ဘယ်သူ့ကို ဆော်ရမှန်း မသိဘူး ဖြစ်နေတယ်ထင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် dkba ကွာ ချာချက်။ ငါတို့သာဆို အပိုင်းပိုင်း လှီးသတ်ပစ်တယ်လို့များ ပြောမလား။
စစ်သွားတိုက်ရင်းဖမိးမိတာမှမဟုတ်ပဲ ဗျုဟာမှူးခိုင်းလိုက်လို့ ဘာတွေဖြစ်ချင်လဲ DKBA ကိုသွားမေးတာပဲ... ဒီလိုလူကိုသတ်ရင်အစကတည်းကဒမြသာသာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့က ဘယ်လောက်ထိသရဲဘောကြောင်တဲ့အဖွဲဖြစ်သွားမလဲဆိုတာတွေကြည့်ပေးတော့။
တကယ်ရင်ထဲကလာတဲ့ စကားဖြစ်ပါစေ သေမှာကြောက်လို့ဆိုရင်တော့မြန်မာစစ်တပ်ဆိုတာ အရှက်ထက် အသက်ကိုဦးစားပေးတဲ့အဖွဲ့ အစည်းလို့သတ်မှတ်ရမယ် တော်တော်တရားမဲ့တဲ့လူတွေ
ရှေ့တန်းမှာ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် တိုက်ခိုက်ရင်းနဲ့ ဖမ်းဆီးခံသွားရလို့ သုံ့ပန်းဖြစ်သွားရတယ်ဆိုတာ နားလည်လက်ခံပေးလို့ရပေမယ့် အခုဟာက ပြသနာကို ငြိမ်းချမ်းအောင် ဆွေးနွေးဖို့လွှတ်လိုက်တဲ့ သူတစ်ယောက်ကို ဖမ်းခေါ်သွားပြီး သုံ့ပန်းအဖြစ်ရလိုက်တယ် ဆိုပြီးပြောနေတယ် ပြီးတော့ သုံ့ပန်းဥပဒေအရ မနှိပ်စက်ပဲ ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုပြီး နာမည်ကောင်းယူနေတယ်...ဘယ်လိုနားလည်ရမှန်းမသိဘူး...
PC*** ဆိုတဲ့ကောင်ဟာ ထမင်းစားပြီးအသက်ရှင်တဲ့ကောင်မှ ဟုတ်ရဲ့လား။ လူတစ်ယောက်လို ဆင်ခြင်တွေးတောနိုင်တဲ့ ဦးနှောက်မရှိတဲ့ စကားတွေပြောတယ်။ မင်းပထွေးတွေလက်ချက်နဲ့ ထောင်ထဲမှာ မသေရုံတစ်မယ် နှိပ်စက်ညှင်းပန်းခံနေရတဲ့၊ လမ်းတွေပေါ်မှာ ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ၊ ပြည်သူတွေ၊ သံဃာတွေက မပြောရဘူး။ မင်းကပဲ ငါးဖယ်ကပြောင်းပြန်။ သောက်ရူး။ သောက်ရှက်လုံးလုံးမရှိတဲ့ကောင်။ ကိုယ့်လိပ်ပြာတော့ကိုယ် ရှက်တက်ကွာ။ မင်းတို့လိုကောင်တွေ ပြောရတာ ပါးစပ်သနတယ်။
ဗမာ့တပ်မတော်ဆိုတာ ဗိုလ်ချုပ်တို့တည်ထောင်ခဲ့တာပါ။ စစ်တပ်မရှိ လို့တော့ မရပါဘူး။ အဲ..ရှိတဲ့စစ်တပ်ဟာလည်း အာဏာရူးတွေ အုပ်ချုပ်တဲ့ တပ်ဖြစ်လို့ အာဏာရူးတွေကြောင့် လူမုန်းခံနေရတာ။ ဗိုလ်တွေအားလုံးမဟုတ်တာတောင် တစ်ချို့ကောင်းကြပါတယ်။ အမြင်မှန်ရှိကြတယ်။ တစ်ချို့ဗိုလ်ချုပ်၊ ဗိုလ်မှူးသား ဗိုလ်တွေသာ မြောက်ကြွမြောက်ကြွဖြစ်နေတာပါ။ အထက်အမိန့်ကို မလွန်ဆန်ရဲ တဲ့ကြောက်တတ်တဲ့ဗိုလ်တွေဆို အထက်ကခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်မှာပါပဲ။ အာဏာရူးတွေကိုလွန်ဆန်တဲ့ ဗိုလ်၊ ဗိုလ်ကြီး၊ ဗိုလ်မှူးတွေများလာမှ အာဏာရူးတွေသက်ဆိုးမရှည်မှာ။
စစ်သား said... :
အဲဒီကောင်တွေက စစ်တပ်ကို ကိုယ်စားမပြုဘူး။ အပေါ်က ကောင်တွေ(mg PC) တို့လိုကောင်တွေက သူတို့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့ ဗိုလ်ချုပ်တစု မွေးထားတာ ခွေးတစ်အုပ်ပါ။ ဒီကောာင်တွေက စစ်တပ်ထဲမှာ လူလူချင်း လူလည် လုပ်တဲ့အုပ်စုပါ။ သတ္တိမရှိ အရည်အချင်းမရှိ မိန်းမရှာလို ကြောက်လို့ ရှေ့ တန်းကို သေအောင်ကြောက်ပြီး ရုရှားလို နေရာမျိုး ကိုရအောင်ယူ ၊ ဒါမှမဟုတ် ကွန်ပြူတာ နည်းနည်းပါးပါးသင်ပြီး စစ်တပ်ထဲမှာ အခြောက် လူလည်ကျ ကျတဲ့ အုပ်စုပါ။ ပြောမနေပါနဲ့ လေကုန်ပါတယ်။ ဒီကောင်တွေ ဗိုလ်သက်နုိုင်နေရာရောက်ရင် (ကန်တော့ဗျာ) အသံတည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ပြောဖို့ နေနေသာသာ သေးထွက်ကျမဲ့ကောင်တွေပါ။ ဒီလိုကောင်မျိုးတွေက on-line မှာတော့ အခြောက်ရန်တွေ့ တက်တက်စွာတတ်ပါတယ်။ ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါဗျာ။ ဗိုလ်ကြီး သက်နိုင်တို့က တကယ်တိုက်တဲ့လူတွေ နားလည်တယ်။ ပင်ပန်းတဲ့ ဘဝတွေကို တကယ်ခံယူရပြီး အနှစ်သာရ မရှိတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တစ်အုပ် ကို ကာကွယ်လုပ်ကျွေးနေရတာကို တကယ့်စစ်သားတွေ စိတ်ကုန်နေကြပါပြီ။
sky said... :
November 13, 2010 at 8:29 PM
ဒီမို ဒီမို အော်နေတဲ့ကောင်တွေစောက်သုံးကို မကျဘူး.. စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင် အရှင်းလေး သွားညှိတဲ့ကောင်ကိုမှ ဖမ်းသွားတယ်ဆိုတည်းက အဲ့တပ်ရဲ့ အဆင့်အတန်းကို ကြည့်လို့ရတယ် ဦးဏှောက်မရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းကို ဦးဏှောက်မရှိတဲ့ သူများနိုင်ငံခိုကပ်စားတဲ့ကောင်တွေက အာဇာနည်ဘွဲ့တွေတွင်တွင်ကြီးပေးနေပါလား...တော်တော်ရယ်ရတယ် ဟဟဟဟဟ
ပြည်သူ said... :
"PC "ဆိုတဲ့လူကို လူလို့ပြောရတာထက် အကောင်လို့ပြောရတာကပိုပြီးတော့ကောင်းမယ်ထင်တယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ခွေးလောက်တောင် ဦးနှောက်မရှိဘူး။
DKBA က ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖမ်းဖမ်း၊ လာပြီးစေ့စပ်တဲ့ အချိန်မှဘဲဖမ်းဖမ်း ..ဘယ်လိုဘဲခေါင်းစဉ်တပ်တပ်၊ ဒီအင်တာဗျုးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ၊ ပြီးတော့ဒီစစ်ဗိုလ်ကိုနှိပ်ဆက်နေလား၊ မြန်မာစစ်အစိုးရကကော ဦဇာဂနာတို့လို ဦးမင်းကိုနိုင်တို့လို ပြည်သူ့အတွက်ကိုယ်ကြိုးစွန့်နေတဲ့သူတွေကို ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးတတ်ပြီးတော့ ဖမ်းဆီး ညှင်းပန်း နှိပ်ဆက်နေတာဘဲမဟုတ်ဘူးလား....အရှေ့တောင်အာရှမှာ မြန်မာပြည်လောက် သဘာဝအရင်းမြစ်တွေကောင်းတဲ့နိုင်ငံရှိအုံးမလား။ အရှေ့တောင်အာရှမှာ နှင်းတောင် ရှိတာဘယ်နိုင်ငံလဲ....အစိုးရ ဆောက်သုံးမကြလို့နိုင်ငံကဖွတ်တက်နေတာ၊ မင်းမျက်လုံးတွေ အရင်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ဦး..မြန်မာပြည်အပြင်ဘက်ခဏလောက် ထွက်ကြည့်လိုက်ဦး၊ ကျွဲခြေရာခွက်ထဲကဖားသငယ်က နောက်ချီးပုံပေါ်ရောက်တော့ သူ့ကိုသူမြင့်လှပြီလို့ထင်နေတာ မင်းနဲ့အတူတူဘဲ...အခုမင်းစားနေတာကောက်ရိုးခြောက်တွေ၊ မြက်တွေမဟုတ်ဘူး၊ မင်းတတ်ထားတဲ့ မျက်မှန်အစိမ်းရောင်ကိုကြည့်ပြီးသေသေချာချာ ကြည်လိုက်ပါအုံး......
သုံ့ပန်းဆိုတာ စစ်ရှုံးလို့ ရန်သူလက်ကို ကျသွားတဲ့ သူကို ခေါ်တာ.. အခုဟာက ငြိ်မ်းချမ်းရေး ပြေရာပြေကြောင်း လာညှိတဲ့သူကို ဆွဲစိထားတာကြီးကို .. သုံ့ပန်းလို့ မသုံးနှုန်းပါနဲ့ .. ဓားစာခံ လို့ ပြောရင် ပိုသင့်တော်ပါမယ်.. ဓားစာခံလုပ်ပြီး ခေါ်သွားတာကို :)
Mr. plus said... :
There are only two points in political affairs.
The winner become government and the loser or powerless opposite troop must be rebel. The interviewed questions of DKBA were very nice which let people know why they became rebel.
Please see with positive site.
လူဆိုတာ ကို့ယုံကြည်ချက် နဲ့ကိုပဲ ကို ရည်မှန်းချက်ကို ပဲ ရောက် အောင် လုပ် ကြပါ...သူများတွေ ကို တိုက်ခိုက်နေဖို့ မလိုဘူးလို့ထင်ပါတယ်.....
အော်မောင်းမင်း pc ရယ် ဘယ်လိုများဖြစ်ရတာလဲ ဗိုလ်သက်နိုင်ပြောတာ အားလုံးဆွေးနွေးရင် အဖြေရမယ်လို့ပြောတာ တိုက်ခိုက်နေလို့တော့ မရဘူး အဲဒါ လူသားဆန်တဲ့ အသိတရားလေ မောင်ရင်ကတော့ ကျွန်စိတ်ပေါက်လိုက်တာ ဘာတဲ့ အထက်ပိုင်းခြင်းပြောရမဲ့စကားတဲ့ အတွေးအခေါ်ဆိုတာ အထက်အောက်မရှိဘူး တာဝန်မှာသာရှိတာ မင်းမလဲ အထက်ကတာဝန်ရှိသူဟာ အတွေးအခေါ်အရလဲ သာတယ်ထင်တာကို မင်းဟာလူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် မှန်တယ်မှားတယ်ကို မင်းကိုယ်တိုင် တွေးခွင့်ရှိပါတယ် ပြည်တွင်းစစ် နှစ် 60 ကိုအဖြေရှာတာလေ မင်းအထက်လူတွေ မလုပ်နိုင်ရင် မင်းတို့ခေတ်မှာ လုပ်နိုင်ရမှာပေါ့ ဒါမှတိုင်းပြည်အေးချမ်းမယ် လက်နက်ကိုင်ပြီးရမ်းကားနေရင် ပြည်သူကိုဒုက်ခပေးနေရင် ဘယ်အဖွဲံ့ပဲံဖြစ်ဖြစ် လူရမ်းကား အဖွဲ့ပဲဖြစ်မယ်လေ လက်နက်ကိုင်တပ်ဆိုတာ လွတ်လပ်တဲ့ အတွေးအခေါ်လက်နက်လဲတပ်ဆင်နိုင်မှ တန်ဘိုးရှိမှာပေါ့၊
ိ်ုဗြောင်ကြီးနော်.... လာပြီးဆွေးနွေးတဲ့ လူကိုတောင်ဖမ်းထားပြီး....စစ်သုံ့ ပန်းဥပဒေ အကြောင်းပြောရဲ သေးတယ်....ငါ့ အဖိုး ရဲ့ အရိုးက ထပြီးတော့များတွန် နေမလားပဲ
နိုင်ငံတကာမှာ စစ်သားအများစုဟာ စစ်သားပီပီပဲ ဖြေချင်ကြ မှာပါ အခု ဒီတွေ့ဆုံခန်းကိုကြည့်ရင် သုံ့ပန်းတစ်ယောက်အနေ နဲ့ သူ့ရဲ့ တစ်ကယ့်အမြင်ကိုပြောတာလား သူသာတစ်ခုခု မှားယွင်းပြောမိခဲ့ ရင်ရော သူ့အသက်ကို ဘယ်သူက အာမခံ ပေးမယ်ဆိုတာကို မယုံလို့ပဲလားတော့ မပြောတတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် အမှားကင်းအောင် တစ်ဘက်အလိုကျ ပြောတာ ကတော့ သေချာပါတယ်၊ DKBA က ပြောတော့ အခုမှသာ နိုင်ငံတကာ သုံ့ပန်းဥပဒေကို သူတို့လေးစားသယောင် ကမ္ဘာ ကိုချပြနေတာပါ၊ ဒီ့အရင်မှာ သူတို့ သတ်ခဲ့တဲ့သူတွေ ဘယ်လောက်ရှိမယ်ဆိုတာ ဘယ်သူက သိမှာလဲ၊ ဘယ်တုန်း ကရော တပ်မတော်စစ်သည် အများစုကို သုံ့ပန်းအနေနဲ့ အရှင် ဖမ်းမိတာ ကြားဖူးလို့လဲ။ ကျွန်တော်ဆိုလိုသည်မှာ တပ်မတော်သား(သုံ့ပန်း)တစ်ဦးကို ဗန်းပြပြီး သူတို့ဖြစ်စေချင် တာကို အကွက်ဖော်ခြင်းကို မြင်စေချင်တာပါ၊ ဒီအရာရှိ နေရာ မှာ ကိုယ်ချင်းစာကြည့်ရင် နားလည်ကြမှာပါ၊ လူတစ်ဦးဟာ ကိုယ့်အသက်ရှင်ဖို့အတွက် အများကိုသာ မထိခိုက်မနစ်နာ ရဘူးဆိုရင် အဆင်ပြေတဲ့နည်းနဲ့ အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး လုပ်ကြမှာပါ၊ အကယ်လို့ တစ်ပါးသူထိခိုက်စေမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်သာအသက်သေခံသွားမယ့် တပ်မတော်သားတွေ အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာ သိစေချင်လို့ အခုလိုပြောတာပါ။ မည်သည့် အဖွဲ့အစည်းဘက်ကိုမျှ ဘက်လိုက်ရပ်တည် ပြောခြင်းမဟုတ်ပါ၊ စစ်သားကောင်း တစ်ယောက်လိုစိတ်ဓာတ် ပြည့်ဝသူများ တပ်မတော်ထဲမှာ အများကြီးရှိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်.....အဲဒါရဲ့နောက်ကွယ်မှာ စစ်သားတိုင်း အလွန် ရိုသေကြောက်ရွံ့ရတဲ့ " အမိန့် " ဆိုတာ ရှိနေတဲ့အတွက် အားလုံးဟာ လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်လို့မရပါ၊ အများ မထိခိုက် မနစ်နာအောင်သာ ကိုယ့်အသိနဲ့ဆင်ခြင်ပြီး နေထိုင်ရင်းနဲ့ပဲ မနှစ်လိုသူတွေကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချမှုကို စစ်သားအများစု(အောက်ခြေ အဆင့်)က ခံနေရတာပါ...ဗိုလ်ချုပ် ပေးခဲ့တဲ့ စစ်ပညာကို တန်ဘိုးထားလေးစားပြီး စစ်သားဟာစစ်သားအလုပ်ပဲ လုပ်ချင် တဲ့ တပ်မတော်သားတွေ အများစုရှိတယ်ဆိုတာ......
ိရိုက်ပေါက် said... :
ဧရာဝတီဆိုက်ကိုတောင်းဆိုချင်တာတစ်ခုရှိပါတယ်...ခုဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့အရာရှိဟာ..စစ်ပွဲအတွင်းမှာသုံ့ ပန်းအဖြစ်အဖမ်းခံရတာလား..ဒါမှမဟုတ်... စေ့စပ်ညှိနှိုင်းဖို့ သွားတာကိုဖမ်းဆီးသွားတာလား..အဲဒါလေးကို စာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေသိအောင်..သတင်းတင်ပြပေးစေလိုပါတယ်.. စေ့စပ်ဖို့ သွားရင်းဖမ်းခံရလို့ မသတ်ပဲ..ပြန်လွှတ်တာဆိုရင်အထင်ကြီးစရာမရှိပါဘူး..အကယ်၍သာ..တိုက်ပွဲမှာဖမ်းမိတဲ့သုံ့ ပန်းကိုပြန်လွှတ်တယ်ဆိုရင်တော့..ကျေးဇူးတင်ရမှာပါ..လေးစားလောက်တဲ့စိတ်ဓါတ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်..ဧရာဝတီကိုးကျေးဇူးတင်လျက်ပါ
November 14, 2010 at 12:49 AM
hello PC, If you were in such situation, how will you answer the questions?????????? Don't be stupid man ,be considered with your heart and soul, not by your superior order...........
အစကဖမ်းတာမဟုတ်ပါဘူး ခေါ်ထားတာပါ စစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကြားတော့မှ
ပြန်မလွှတ်ဘဲ ခေါ်ထားတာပဲ အစပိုင်းဖုန်းနဲ့မေးတုန်းက ဖမ်းထားတယ်လို့ သူတို့ သုံးရဲလား ဆိုတာ အသံဖိုင်ကို ပြန်နားထောင်ပါ သုံ့ပန့်ဖမ်းတယ်ဆိုတာ စခန်းတစ်ခုကို တိုက်ပြီး မိတဲ့ တစ်ဖက်ရန်သူကိုမှ သုံ့ပန်းလို သုံးနှူံးပြီးဖမ်းတာပါ အခုဟာ ဘာလိုဖြစ်ရတာလဲဆိုတဲ့ အခြေအနေကိုသိဖို့ လွတ်လိုက်တဲ့သူပါ ...ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပါ DKBA ဆိုတာ သူတို့ကရင်တွေအတွက်ပဲတိုက်ပွဲဝင်နေတာပါ ကရင်လူမျိုးတွေအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရအောင်လဲ ကရင်တွေကို ဘယ်သူကမှ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး ..စစ်တပ်ဆိုတာက ကရင်လူမျိုးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး တစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုကာကွယ်နေတာပါ သင်တန်းကျောင်းတွေက သင်ပေးလိုက်တာကလဲ တပ်အသီးသီးကိုရောက်ရင် ပြည်သူ့အကျိုးကိုသယ်ပိုးဖို့ပဲ မှားကြားပါတယ်
ပြည့်သူ့အကျိုးကိုဖျက်စီးဖို့ မမှာကြားပါဘူး စဉ်းစားကြည့်ပါ ဒီနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကို စစ်တပ်က မကာကွယ်ရင် ဘယ်သူကာကွယ်မှာလဲ လူထုအုံကြွမှုတွေ စစ်တပ်က အချိန်မှီမတားဆီးရင်
နောက်ပိုင်းဖြစ်လာမယ့်အကျိုးဆက်က ကောင်းကွက်ဆိုတာ မရှိပါဘူး လူဆိုးအမည်ခံပြီးတားဆီးရတယ် စစ်သားတွေဆိုတာလည်း ဘယ်ဂြိုဟ်ဘယ်ကမ္ဘာ ကမှ ပေါက်ဖွားလာတာမဟုတ်ဘူး ဒီနိုင်ငံ ဒီမိသားစုကပဲ ပေါက်ဖွားလာတာ ငါတို့တွေ ငါတို့မိသားစုကိုမစော်ကားဘူး
ငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့လို့ ငါတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တယ် ငါတို့ တပ်တွေမှာ ပါတ်ဝန်းကျင်ရပ်ရွာတွေရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုပဲ လုပ်ခဲ့တယ် ..ငါတို့လုပ်နေတာ ငါတို့ကာကွယ်နေတာ ငါတို့ဗမာလူမျိုးတစ်ခုတည်းအတွက်မဟုတ်ဘူး မြန်မာနိုင်ငံမှာနေတဲ့ လူတွေ မှန်သမျှအတွက်ဘဲ ငါတို့မှာ မင်းတို့လိုဘဲ မိဘတွေရှိတယ် မောင်နှမတွေရှိတယ် သူငယ်ချင်းတွေ ရှိတယ် ချစ်သူတွေရှိတယ် ငါတို့လည်း မင်းတို့တွေလို အေးအေးချမ်းချမ်း ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ နေချင်တာပေါ့ ဒါပေမယ့် ငါတို့စစ်သား၊ ဒီလမ်းကြမ်းတယ် ဆူးညှောင့်တွေရှိတယ် ဗုံးတွေ မိုင်းတွေရှိတယ် အချိန်မရွေး သေသွားနိုင်တယ် မသေရင်တောင် ကိုယ်လက်အင်္ဂါတွေပေးရလိမ့်မယ်
မင်းတို့သွားစရာမလိုပါဘူး ငါတို့စစ်သားမို့ ငါတို့သွားမယ် ငါတို့သာအဲလိုမလုပ်ရင် မင်းတို့ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေရမှာမဟုတ်ဘူး မြ၀တီမြို့ကိုကြည့် သူ့ဘာသူ ကိုယ့်စီးပွားရေးကိုလုပ် ကိုယ့်ပညာကိုယ်ရှာပြီး အေးချမ်းနေတာ ဘယ်သူက ကမောက်ကမဖြစ်အောင် ၀င်လုပ်သွားလဲ မျက်မြင်ပါပဲ မျက်စေ့စုံမှိတ်ပြီး စစ်သားတွေကို လက်ညှိုးထိုးမနေပါနဲ့ တစ်ကယ်ငြိမ်းချမ်းချင်ရင် တစ်ကယ်တိုးတက်ချင်ရင် ပြည်တွင်းမှာငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ လုပ်စမ်းပါ မိမိကိုယ် တိုးတက်အောင် မိမိကိုယ်ကို ကြီးပွားအောင် မိမိကိုယ်ကို တွေးခေါ်မှုတွေ မြင့်မားအောင် မင်းတို့တစ်ယောက်ချင်းဆီသာ တိုးတက်ကြပါစေ ချမ်းသာကြပါစေ ပညာရှိတွေဖြစ်ကြပါစေ အဲဒါနိုင်ငံတော်ကြီးတိုးတက်တာပဲ ချမ်းသာတာပဲ ဘာမှထွေထွေထူးထူးလုပ်နေစရာမလိုဘူး ဘာမှလဲ လက်နတ်တွေကိုင်ပြီး ကရင်တွေအတွက် ရှမ်းတွေအတွက် ကချင်တွေအတွက်ဆိုပြီး တောထဲမှာ နေပြီး ကျီးလန့်စာစားနေစရာမလိုဘူး နိုင်ငံတော်ကြီးအတွက်ဆိုပြီး ချီပြီးလဲလုပ်နေစရာမလိုဘူး တစ်ယောက်ချင်းသာ တိုးတက်အောင်လုပ်ကြပါဦး ..ငါတို့ ဒီမိသားစုကြီးကပေါက်ဖွားတာပါ ငါတို့မိသားစုကိုမစော်ကားဘူး မမိုက်ရိုင်းဘူး ကိုယ့်မိသားစုကိုစော်ကားလာရင်လဲ ဘယ်သူကမှခံမှာမဟုတ်ပါဘူး အခုတော့ တွေ့နေရပါတယ် ကိုယ့်မိသားစုထဲကကောင်တွေကပဲ ကိုယ့်နိုင်ငံကြီးကို သူများနိုင်ငံသားတွေရှေ့မှာ စုတ်ပြတ်သက်နေတဲ့ ပုံစံမျိုးတွေ ဖြစ်အောင်လှစ်ပြကြတယ် နိုင်ငံရဲ့ အလေးအမြတ်ထားတဲ့ အလံကို ဖြဲတဲ့သူကဖြဲ မီးနဲ့ရှိူ့တဲ့သူကရှိူ့ ဖင်မှာဆေးနဲ့ဆွဲပြီး ကိုယ်တုံးလုံး လူတစ်ကာရှေ့မှာနေတဲ့သူကနေ အေး သူများနိုင်ငံသားတွေက မင်းတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကို အရင်မမြင်ဘူး မင်းတို့ အော်နေတဲ့ မြန်မာမြန်မာ ဆိုတာ မင်းတို့ပုံတွေကြည့်ပြီးအရင်သုံးသတ်ကြမှာပဲ အဲဒါကိုပြောတာ အသားထဲကလောက်ထွက်တယ်ဆိုတာ အဲဒီပိုးကောင်တွေ လောက်ကောင်တွေ ကပြည်တွင်းမှာ ပြဿနာများများဖြစ်လေ သူတို့ ပျော်ရွှင်လေပဲ ဟေ့ရောင်ရေ အဲဒီပိုးကောင်တွေ လောက်ကောင်တွေက သူတို့ပေါက်ဖွားရာ အသွေးအသားကို စားမှ အသက်ရှင်ကြရတာ သူတို့လုပ်တဲ့လုပ်ရပ်တွေက ကောင်းကွက်တစ်ခုမှဖြစ်မလာဘူး တို့နိုင်ငံတွင်းမှာလဲ ရှိပါတယ် အားယားနေတဲ့ကောင်တွေ သူများ ၀ူးဝါးဝူးဝါးဆိုရင် ဘာမှန်းမသိဘူး ကိုယ်ပါလိုက်ဝူးဝါးဝူးဝါးလုပ်ချင်ကြတယ် ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်နေကြတဲ့သူတွေ ကိုယ့်ကြီးပွားရေးကိုယ်ရှာနေကြတဲ့သူတွေ ကိုယ့်တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းအတွက် ပညာသင်နေတဲ့သူတွေ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရတယ် လမ်းတွေပိတ်တယ် ထိတ်လန့်ရတယ် စိုးရိမ်ကြောင့်ကျကြရတယ် ..
ပြောရမယ်ဆိုရင် အများကြီးပါပဲ အဲဒီတော့ စဉ်းစားပါ ကိုယ့်လုပ်ရပ်က ဘာတွေကောင်းကျိုးဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာ
ငါတို့တွေကို အားပေးနေဖို့လဲမလိုပါဘူး တစ်ခုပါပဲ ပုံကြီးတော့မချဲ့ကြဖို့ပါပဲ
ခုဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်နေရတာ ဘယ်လိုမှစိတ်မသက်သာဘူး အစကပြောခဲ့သလိုပဲ သံတမန်အနေနဲ့လာတဲ့သူကိုသတ်လို့လဲ မရပါဘူး ဖမ်းထားလို့လဲ မရပါဘူး အဲဒါစော်ကားတာပဲ စစ်တပ်မှာ တော်တဲ့သူတွေအများကြီးပါ DKBA ကိုသိမ်းချင်တယ်ဆိုရင် အများကြီးမခက်ခဲပါဘူး ကြားထဲမှာရှိတဲ့ ပြည်သူလူထုကိုသာအားနာလို့ ခုခောတ်ခါမှာ စစ်ကိုအတက်နိုင်ဆုံး မဖြစ်အောင် ရှောင်နေကြတာပါ ဒါကတော့ ကိုယ်တိုင်ကြုံတဲ့သူတွေပဲ ပိုနားလည်ကြလိမ့်မယ် ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာ အဖြေတစ်ခုတည်းကို မေးခွန်းအထပ်ထပ်မေးနေတယ် တစ်ကယ်ပဲ စေ့စပ်ညှိုနှိုင်းချင်ရင် လက်နတ်ကိုင်မနေပါနဲ့ လက်နတ်ကိုင်နေသရွေ့ကတော့ စေ့စပ်ညှို့နှိုင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး ..
November 14, 2010 at 2:42 AM
သေခါနီး အာဏာရူးတွေအတွက် နောက်ထပ် အသက်ပေါင်းဘယ်လောက်များ စတေးရဦးမလဲ..ဗိုလ်ချူပ်ဖွဲ့ခဲ့တယ့် စစ်တပ်ကပြည်သူတွေအတွက် အကာအကွယ်ပေးဖို့ပါ၊ပြည်သူ့ဘက်က ရပ်တည်ဖို့ပါ...ဗိုလ်သက်နိုင်လို အတွေးအခေါ်ရှိတယ့် သူတွေတပ်ထဲမှာ အများကြီးရှိဦးမှာပါ...ကိုယ့်ရဲ့တပ်ကိုဦးစီးပီး ပြည်သူတွေအတွက် အမှန်တကယ်လုပ်ပေးစေလိုပါတယ်...ပြည်သူတွေစီကရလာတယ့် ငွေအသားပြာတွေနဲ့ ပြည်သူတွေကိုတော့ပြန်မသတ်မိပါစေနဲ့ဗျာ...တပ်ထဲမှာကော အမှန်တကယ်ချောင်လည်လို့လား...တကယ်တော့ စစ်တပ်လည်း ဒုက္ခသည်တွေထဲက ဒုက္ခသည်ပါပဲ...ဒီအာဏာရူးတွေက ဇာတ်တူသားစားနေကြတာ...ကိုယ့်အမျိုးကိုပြန်သတ်၊ ဂုတ်သွေးစုပ်နေကြတာ...ပြည်သူတွေပေးတယ့်ပိုက်ဆံတွေနဲ့ ပြည်သူတွေကိုပြန်သတ်ဖို့ကိုတော့မလုပ်ကြပါနဲ့ဗျာ...ကိုယ့်လက်ထဲမှာကိုင်ထားတယ့်လက်နက်ဟာ ဘယ်သူပိုင်တာလဲဆိုတာကို ဦးနှောက်နဲ့နှလုံးသားနဲ့ စဉ်းစားဆုံးဖြတ် နိုင်ပါစေ...
PC***မင်းလိုဦးနှောက်မရှိတယ့်လူမျိုးတွေအတွက် အလုပ်ရှိတယ်...စွမ်းအားထဲသာဝင်လိုက်တော့၊ ဒါပေမယ့်ဒီကောင်တွေက ထမင်းစားနေတာတော့မဟုတ်ဘူး၊ enjoy with them
PC နဲ့ MG ပြောတဲ့ စစ်သုံ့ပန်းဆိုတဲ့ Definition နဲ့ပါတ်သက်ပီး သဘောတူပါတယ်။
ဒါဟာ ပြန်ပေးဆွဲပီး နိုင်ငံရေး အမြတ်ထုတ်တာပါ။
နအဖ က နိုင်ငံရေး ပုဒ်မ နဲ့ လူတွေကို မော်စကို ပို့သလိုမျိုး လေ။
DKBA က ဆရာကြီး ရဲ့ အာဘော် ကြားရတာ ကြေးမုံသတင်းစာ တို့ မြန်မာအလင်း သတင်းစာ တို့ ဖတ်နေရ သလိုပါပဲ။
DKBA က နအဖ ရဲ့ စိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေးနည်း ကို အတုခိုး ကြည့်တာပါ။
DKBA က ဆရာကြီးကိုပြောချင်တာက နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဖြေရှာမယ် ဆိုတာက ကြားရတာ နားချမ်းသာစရာကောင်းပေမဲ့ လက်တွေ့ဖြစ်နိုင်၊ မဖြစ်နိုင်ဆိုတာ နအဖ ရော၊ နိုင်ငံရေး အတိုက်အခံ အင်အားစုအားလုံးရော၊ လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသား အားလုံးရော သိနေတဲ့ကိစ္စပါ။
ဗမာ တွေ အချင်းချင်း ညီညွတ်အောင် အရင် လုပ်ကြပါဦး၊
ကရင် တွေ အချင်းချင်း ညီညွတ်အောင် အရင် လုပ်ကြပါဦး၊
ကချင် တွေ အချင်းချင်း ညီညွတ်အောင် အရင် လုပ်ကြပါဦး၊
ရှမ်း တွေ အချင်းချင်း ညီညွတ်အောင် အရင် လုပ်ကြပါဦး၊
ချင်း တွေ အချင်းချင်း ညီညွတ်အောင် အရင် လုပ်ကြပါဦး၊
မွန် တွေ အချင်းချင်း ညီညွတ်အောင် အရင် လုပ်ကြပါဦး၊
ပီးမှ ပြဿနာကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေး ဆိုတာ ဆက်ပြောကြတာပေါ့။
ဒီကိစ္စမှာ တာဝန်အရှိဆုံး ကတော့ ဗျူဟာမှူးပါပဲ။
ဒီလောက်ပြဿနာ ရှိတဲ့နေရာမှာ ကိုယ့် လက်အောက် အရာရှိတစ်ယောက်ကို လက်လွတ်စပါယ် လွှတ်တာ ဟာ သူ့အရည်အချင်း ကိုပြတာပါ။
ဗျူဟာမှူးကြီးကို အကြံပေးချင်တာက နောက်တစ်ခါ လူလွှတ် စုံစမ်း ချင်ရင် အရာရှိတစ်ယောက်ကို လွှတ်မဲ့အစား မော်ဒါယ်လ် ဂဲလ်လ်လ်လ်လ် လေးတစ်ယောက် လွှတ်ကြည့်ရင် ပိုပီး အဆင်ပြေ ပါလိမ့်မယ်လို့-
ဗိုလ်ကြီးသက်နိုင် ဖြေတာ အားလုံးကောင်း ပါတယ်။
ကို PC ရေ နအဖစစ်သားတွေ ပြည်သူတွေကို တောတောင်ထဲမှာမပြောနဲ့ မြို့ပေါ်မှာ သတ်ဖြတ်တာကော "မင်းတို့မှာ သားသမီးရှိရင် ကိုယ်ချင်းစာ ကွ...ယုတ်မာလိုက်ကြတာ " လို့်ဘာလို့မပြောတာလဲ..
November 14, 2010 at 12:18 PM
In this video, I dont' know who is asking Capt Thet Naing?
I think he is afraid to show his face.
He ask capt Thet Naing "why there has beenawar between the government and rebels for 60 years"?
I would like to ask you "why you (DKBA) split from KNU?"
မြန်မာပြည်သား said... :
Anonymous ဆိုတဲ.လူရေ မင်းကကြေးမုံနဲ.မြန်မာ.အလင်းသတင်းစာထဲကအာဘော်တွေပါကွာ မင်းအဲဒီထဲမှာဘဲသွားရေးစမ်းပါ ဒီမှာလာမရေးနဲ. သောက်ရှုး
ဒီ video မှာဖြေထားတာ စစ်တပ်မကောင်းကြောင်းလဲမပါပါဘူး
ပြေရာပြေကြောင်းသွားညှိ တယ် ဒါးစာခံဖြစ်တယ် ရန်သူအကြိုက်လိုက်ပြောပြီးလွတ်လာတယ် ဒါကို မင်းတို့စစ်တပ်က အရေးယူ အုံးမယ် စစ်ကြောရေးပို့အုံးမယ် စစ်တပ်ကထုတ်ခံရအုံးမယ် အသတ်တောင်ခံရနိုင်တယ်ဆိုတော့ မင်းတို့စစ်တပ်ကသူပုန်စစ်တပ်လား မင်းတို့ဘဝကလဲ အရာရှိအမြင်စောင်းရင် ဖြုတ် ထုပ် သတ် ပဲနော်
အိမ်မွေးခြံစောင့်ခွေးတွေလိုပဲ ကြောသပ်မွေး အကြွင်းကျန်ကြွေး မှားတော့ကြိုးတုတ်ရိုက်သေး ဒါတောင်အမှီးကုပ် မြေကြီးမှာဝပ်ပြီး သခင်ခြေထောက်ရက်ပေးနေရသေးတယ်
သခင်အကြိုက်ဟောင်ဖို့တော့ ဘုန်းကြီးမသိ လူကောင်းမသိ စွာလိုက်တာ
ငါ့တို့တိုင်းရင်းသားတွေ တိုက်ပွဲဝင်နေတာ ငါတို့တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစု ကောင်းစားဖို့လား ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသား ပေါင်းစုံတိုးတက်ကြီးပွားဖို့လား ငါ့လူမျိုး ငါ့ပြည်နယ် ဆိုပြီးအားလုံးခွဲထွက်နေကြရင် ငါတို့နိုင်ငံဘာကျန်တော့မလဲ လူမျိုးစုခွဲထွက်တွေကရော ငါတို့လူမျိုးပြည်နယ်ကို ငါတို့အင်အားနဲ့ နိုင်ငဲတကာအဆင့်မှီအောင် ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့လုပ်ကြမလဲ အရင်းအမြစ်တွေကို ဒီပြည်နယ်ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲက ဘယ်နားရှာမလဲ ရည်ရွယ်ချက်ကဘာတွေလဲ လူတစုကောင်းစားဖို့အတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာလား
အပေါ်က တိုင်းပြည်ရဲ့ သားကောင်းရတနာ လေးတွေရေ...မင်းတို့ မိသားစု...ဆွေးမျိုးကောင်းစားဖို့ပဲ ကြည့်မနေနဲ့....မင်း စစ်သားလစာ ဘယ်လောက်ရလဲ..မင်းအခု တနေကုန် အင်တာနက်သုံးနိုင်တာ..ဘယ်က ပိုက်ဆံတွေနဲ့ လဲ....အဲဒါ မင်းဘာသာ စဉ်းစားကြည့်...မင်းတို့ မတရား အနိုင်ကျင့်၊ခိုးယူ၊အဓမ္မကျင့်ယူဖို့ ပဲ စဉ်းစားမနေနဲ့...မင်းတို့ နိုင်ငံခြားပညာ သင်တွေ သွားနိုင်တာ...သွားခဲ့တာ..မင်းမိဘ ပိုက်ဆံတွေ နဲ့ မဟုတ်ဘူး...ပြည်သူ့ပစ္စည်းတွေ...မင်းတို့ သေချာစဉ်းစား...မင်းတို့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးပိုက်ဆံ မဟုတ်ဘူး...မင်းတို့က ပြည်သူလူထု ကို ကာကွယ်စောင့် ရှောက်ဖို့..နှိပ်စက်ဖို့ မဟုတ်ဘူး...
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ၊ ကိုယ့်မိသားစု ၊ ကိုယ့်အသိုင်းအ၀ိုင်း အဆင်ပြေပြေ နဲ့ တိုးတက်အောင် အရင်လုပ်ကျပါအုံး အဲဒါကို လုပ်နိုင်ပြီ အောင်မြင်ပြီဆိုမှ ဆက်ပြောပေါ့ အလကား လျှောက်ပြောမှ ထမင်းစားရမဲ့အလုပ်တော့မလုပ်ကြပါနဲ့
DKBA ရဲ့သူရဲဘောကြောင် မိန်းမဉာဏ် နဲ့လုပ်ရပ်အဖြစ်မြင်ပါတယ်။ ဒီလိုအောက်တန်းကျ လုပ်ရပ်ကို ကမ္ဘာကိုတင်တာ ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အဆင့်အတန်း ဘယ်လောက်ရှိတယ် ဆိုတာကိုလှစ်ပြလိုက်သလိုပါပဲ။ လာရောက်ဆွေးနွေးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကို ဓါးစာခံလုပ်ပီး သုံ့ပန်းအဖြစ် ပြန်လွှတ်ပေးတယ်ဆိုကာ နာမည်ကောင်းယူချင်တယ်။ဒါပေမယ့် သတင်းဖတ်တဲ့ လူတွေကလဲ နလပိန်းတုန်း တွေမှမဟုတ်တာ။ သတင်းဖတ်သူတွေကိုလဲ ဘာပြောပြောယုံမှာပဲ ဆိုပီးအထင်သေးတဲ့ သဘောလဲ သက်ရောက်ပါတယ်၊ အရင်ထောက်လှမ်းရေးခေတ် တုန်းကဒီဖက်က အရာရှိကြီးတွေ KNU ဖက်သွားပီး စေ့စပ်ခဲ့တဲ့ သာဓက တွေရှိခဲ့ဘူးပါတယ်။ လူကြီးလူကောင်း ဆန်ဆန်ပဲ ဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်မြကလဲ ရန်ကုန်လာပီးဆွေးနွေး ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ အခုလို သေးသိမ်တဲ့ သတင်းမျိုးတွေ မကြားခဲ့ရဖူးပါဘူး။ ဘာပဲပြောပြော KNU လောက်အဆင့်အတန်းမရှိတာတော့ အမှန်။ ဒါကြောင့်လဲ နအဖ ချကျွေးတဲ့ အရိုးအရင်းလေး ကိုက်နေရတဲ့ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်နေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဗိုလ်နုတ်ခမ်းမွေးကိုသွားခိုင်းကြည်.ပါလား ရှေ.လေး နောက်ခြောက် ဘယ်ညာ ခုနစ် နဲ.သွားမှာ ။ဗိုလ်သက်နိုင်ရေ မင်းကိုအင်တာဗျူးတဲ.လူနဲ. ကံကြုံလို.ပြန်ဆုံကြသေးရင် ဗမာ.သတ္တိလေး ပြလိုက်ပါကွာ ။ငါတို.လူမျိုးဟာ မညံ.ခဲ.လို. အရင်က ဘာအမည်ရှိမှန်းမသိတဲ. ဒီတိုင်းပြည်ကို ဗမာပြည်ဖြစ်စေခဲ.တာ သမိုင်းသင်ခဲ.ဘူးသူတိုင်းသိပါတယ်ကွာ ။ဗမာများလို.ဗမာပြည်ဖြစ်လာခဲ.တာမဟုတ်ပါဘူး။ အရင်တုန်းကဒီတိုင်းပြည်မှာငါတို.က အနည်းဆုံးပါ။မကောင်းတဲ.စစ်သားကိုသာမြင်ဘူးကြားဘူးထားတဲ.လူတွေဟာကောင်းတဲ.စစ်သားရှိမှန်းမသိချင်ယောင်ဆောင်နေတတ်တယ်ကွ။တစ်ကယ်တော.ငါတို.ပြည်ပမှာအလုပ်လာလုပ်တဲ.ဗမာတွေဟာ စစ်သားထက်အဆတစ်ရာဆိုးတဲ. မြန်မာပြည်သားတွေနဲ. ကြုံဘူးကြပါတယ်။ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးမျိုးတွေကိုမကြုံဘူးသေးတဲ.လူတွေကတော.မောင်တို.စစ်သားကိုသာဆိုးတယ်ထင်နေမှာပါ။ကြားဘူးဆို ဘယ်သတင်းဌာနမှလည်း မရေးရဲကြဘူးလေ။ အထူးသဖြင်.ယိုးဒယားကသတင်းဌာနတွေပေါ.ကွာ။လူတွေကိုရောင်းစားတတ်တဲ. တိုင်းရင်းသားပွဲစားတွေအကြောင်းများရေးရဲသလားလို.မေးကြည်.ပါလား။ငါးဖမ်းလှေတွေပေါ်ရောင်းစားခံရတဲ.ဗမာတွေအကြောင်းကြားဘူးတယ်မလား ။ဒါပါပဲကွာ ။
ps/ ငါကိုစစ်သားလို.မင်းထင်နေအုန်းမယ် ။ အလုပ်သမားပါကွ ပြည်ပမှာ
Look carefully at his body movements(body languages),you can guess that what he was saying is with fear or without afraid.
ဗိုလ်သက်နိုင်ရဲ့ပုံကြည့်ရတာ တစ်ဖက်က သေနတ်နဲ့ချိန်ထားခံရတဲ့အတိုင်းပဲ.. ဘယ်လိုအဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ သံတမာန်ဆိုတာ မဖမ်းရဘူး ဘယ်လောက်ပဲရန်ညိုးကြီးကြီး ဒါ ကိုယ့်အဖွဲ့ ရဲ့ သိက္ခာကို ချသလိုဖြစ်နေတယ်..သတင်းဠာနတွေအနေနဲ့လည်း ကိုသူရပြောသလို မရေးရဲကြဘူး သတင်းဆိုတာ အသက်ပဲလေ မှန်ကန်အောင်ရေးမှ အနာဂတ်လူငယ်က လက်ခံလာမှာ မမှန်မကန်တွေရေးပြီး မကောင်းတဲ့အချက်တွေပဲ လိုက်တင်နေတော့ ဒါကိုဖတ်တဲ့ လူငယ်တွေစိတ်မှာ ဒါမျိုးအတွေးပဲဝင်ကုန်ကြမှာပေါ့ ကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ်ချစ်ရင် မှန်ကန်တဲ့သတင်းမှန်သမျှ လက်တွေဖြစ်ပျက်တာမှန်သမျှ ပြည်ပ လူကုန်ကူးနေတာ သူများနိုင်ငံမှာ ကိုယ့်လူမျိုးချင်းတောင် ခေါင်းပုံဖြတ်နေတာ ဒါတွေ ရေးကြပါလား.. အကြံပေးတာပါ.. ဘယ်လိုမှတော့ သဘောမထားနဲ့ .. ကိုသက်နိုင်ရေ လေးစားတယ်ဗျာ...
irrawaddy site is the place of sit khways. and shamelessly ask for donation. ask from than shwe.
ဧရာဝတီသတင်းဌာနအနေနဲ့နောက်တစ်ခေါက်လောက်ပြန်လည်ဖေါ်ပြသင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အကြောင်းအရာကဗိုလ်ကြီးသက်နိုင်ဟာသံတမန်ရေးအရသွားရောက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာလား၊ ဒါမှမဟုတ် စစ်တိုက်ရင်း တိုက်ပွဲမှာရှုံးနှိမ့်လို့အဖမ်းခံရတာလားဆိုတာကိုတော့ပြန်လည်ဖေါ်ပြသင့်ပါတယ်ယခုခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့နိုင်ငံတကာစစ်သုံ့ပန်းဥပဒေအရမနှိပ်စက်ပါဘူး၊နောက်ပြီးဗိုလ်ကြိးသက်နိုင်ပါးစပ်ကထပ်တလဲလဲထွက်နေတဲ့လူသားချင်းစာနာပါတယ်ဆိုတဲ့စကားဒါတွေရိုးရိုးသားသားမှဟုတ်ပါသလားဆိုတာကိုလည်းပြန်လည်ရှင်းလင်းပြသင့်ပါတယ်၊ဗမာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ကျနော်အနေနဲ့ဧရာဝတိဆိုက်ကိုနေ့စဉ်မပြတ်အားပေးဖတ်ရှုပါတယ်။ကျနော်အသိညာဏ်တွေလည်းပိုရပါတယ်ဒါကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမယ့်ဒီအကြောင်းအရာဟာအမှန်တွေမဖြစ်နိုင်သလိုမတရားမှုတွေပါနေတယ်လို့ထင်ရပါတယ်အင်တာဗျုးမှာဗိုလ်ကြီးသက်နိုင်ကိုသာပြပြီးဆွေးနွေးနေသူကဘယ်ကဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်းမသိရတာရယ်ဘေးပတ်ပတ်လည်အခြေအနေလွတ်လပ်မှူရှိမရှိဆိုတာတွေကိုမသိရတဲ့အတွက်မှန်ကန်တဲ့အင်တာဗျူးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျနော်ထင်မိပါတယ်ခြိမ်းခြောက်မှုတွေအောက်မှာရောက်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မို့မှန်ကန်စွာသတင်းများကိုဖေါ်ပြပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျား